အဘယ်ကြောင့် DAEMONS TOOLS များထဲမှာပုံရိပ်တပ်ဆင်ထားမရ - DAEMONS TOOLS များ - 2019
သင့်ကွန်ပျူတာကိုအသုံးပြုတဲ့အခါတစ်ခါတစ်ရံသင် hard disk ကိုအလုပ်အတွက်ပြဿနာများကိုသတိပြုမိပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ BSOD သို့မဟုတ်အခြားအမှားများသည် Periodic အသွင်အပြင်အတွက် HDD ၏အလုပ်၏အသံအတိုးအကျယ်ကိုတိုးမြှင့်ရန်, ဖိုင်ကိုဖွင့်လှစ်နှုန်းနှေးကွေးမှာသူ့ဟာသူကိုထင်ရှားစွာပြနိုင်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတွင်ဤအခြေအနေတန်ဖိုးရှိသောအချက်အလက်များ၏ဆုံးရှုံးမှုဒါမှမဟုတ် operating system ကိုတစ်ဦးအပြည့်အဝစုဝေးဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပေးနိုင်သည်။ ကို OS က7windose disk ကို drive ကိုအတူ PC ကိုချိတ်ဆက်ထားပြဿနာများကိုဖော်ထုတ်ပေးအဓိကနည်းလမ်းများဆန်းစစ်ကြပါစို့။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: အကျိုးကဏ္ဍအပေါ် hard drive ကိုစစ်ဆေးခြင်း
Windows7မှာ hard disk ကိုရောဂါရှာဖွေရေးများအတွက်နည်းလမ်းများ
နည်းလမ်းများစွာအတွက် Vindovs7မေလတွင် hard disk ကိုရှာဖွေရေးမှာ။ အထူးပြု software များကိုဖြေရှင်းချက်ကိုလည်းစံ operating system ကိုစစျဆေးဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်ရှိပါတယ်။ ထိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မှအရေးယူဆောင်ရွက်မှုများ၏တိကျသောနည်းလမ်းများနောက်ပိုင်းမှာဆွေးနွေးတင်ပြပါလိမ့်မယ်။
Method ကို 1: Seagate SeaTools
SeaTools - ပြဿနာများ၏ရှေ့မှောက်တွင်ဆုံးဖြတ်ရန်နှင့်ဖြစ်နိုင်သည်သူတို့ကိုပြင်ပေးဖို့သိုလှောင်ရေးကိရိယာစကင်ဖတ်စစ်ဆေးခွင့်ပြု Seagate ရဲ့အစီအစဉ်မှအခမဲ့ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်. သင်၏ကွန်ပျူတာစံများနှင့်ထိုးထွင်းသိမြင်ပေါ်မှာ Installing, မရှိထပ်မံဖော်ပြချက်လိုအပ်သည်။
SeaTools စတင်ရန်။ သငျသညျပထမဦးဆုံး program ကို run လိုက်တဲ့အခါအလိုအလျှောက်ထောက်ခံသိုလှောင်ရေးကိရိယာကိုရှာပါလိမ့်မယ်။
ထို့နောက်လိုင်စင်သဘောတူညီချက်များ၏ window ကိုဖွင့်လှစ်။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်နိုင်ရန်အတွက်, သင် button ကို click ရမယ် "I Agree".
SeaTools ကွန်ပျူတာချိတ်ဆက် hard disk ကို drives တွေကိုပြသခံရဖို့ရာအတွက်အဓိကင်းဒိုးဖွင့်လှစ်။ ထိုခဏခြင်းတွင်သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးအခြေခံသတင်းအချက်အလက်ပြသထားတယ်:
မော်ဒယ် number ကို;
firmware version ကို;
Drive ကိုအဆင့်အတန်း (အဆင်သင့်သို့မဟုတ်စမ်းသပ်ဘို့အဆင်သင့်မရ) ။
ကော်လံလိုလျှင် "ဟုအဆိုပါ drive ကို၏ပြည်နယ်" install လုပ် hard drive ကို၏တပ်မက်လိုချင်သောအ status ကိုမှလာမယ့် "စမ်းသပ်ဖို့အသငျ့ရှိ"ဒါဟာသတင်းအချက်အလက်သယ်ဆောင် scan ဖတ်စေနိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ ဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုစတင်ရန်၎င်း၏နံပါတ်စဉ်၏လက်ဝဲရန်အကွက်ကိုစစ်ဆေးပါ။ ခလုတ်ကို "အခြေခံစမ်းသပ်မှု"ပြတင်းပေါက်၏အထက်ပိုင်းတွင်တည်ရှိပြီးတက်ကြွဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ သင်ဤအကြောင်းအရာသည်ကို click လိုက်တဲ့အခါသုံးပစ္စည်းများကိုတစ် menu ကိုဖွင့်လှစ်:
တစ်လောကလုံးကို Long ။
ကြောင်းပြီးနောက်ချက်ချင်းရေတိုရေရှည်မျှော်မှန်းချက်ပြီးနောက်, hard disk ကိုအပေါ်သတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူပြတင်းပေါက်လည်းမရှိ။ ဤတွင်ကျနော်တို့အဓိက window တွင်မြင်ကြပြီဖြစ်သော hard drive ကိုအပေါ်ဒေတာပြသနှင့်အပြင်အောက်ပါနေကြသည်:
အထက်ပါအချက်အလက်များ၏အားလုံးခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်သီးခြားဖိုင်သိမ်းဆည်းနိုင်ပါသည် "File မှ Save" တူညီသောပြတင်းပေါက်၌တည်၏။
disc ကိုအကြောင်းပိုမိုသတင်းအချက်အလက်ရှာဖွေကအဓိကအစီအစဉ်ကိုပြတင်းပေါက်မှာထပ်လိုအပ်သည်အနားမှာအမှတ်အသားတစ်ခုရှိပါတယ်, ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "အခြေခံစမ်းသပ်မှု"သို့သော်ဤအချိန်ကိုရွေးချယ်ပါ "က Short-ရည်ရွယ်ချက်".
စမ်းသပ်ခြင်း Started ။ ဒါဟာသုံးအဆင့်သို့ကွဲပြား:
လက်ရှိခြေလှမ်း၏အမည်ကိုကော်လံထဲမှာဖော်ပြပါတယ် "ဟုအဆိုပါ drive ကို၏ပြည်နယ်"။ ကော်လံအတွက် "ပြည်နယ်စမ်းသပ်" ဒါဟာသော graphical ပုံစံနှင့်တစ်ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်လက်ရှိစစ်ဆင်ရေး၏တိုးတက်မှုကိုပြသထားတယ်။
စမ်းသပ်မှုများအပြည့်အဝပြီးစီးပြီးနောက်လျှောက်လွှာများ၏ပြဿနာကော်လံ၌တွေ့ကြပြီမဟုတ်ပါလျှင် "ဟုအဆိုပါ drive ကို၏ပြည်နယ်" ပြသ "က Short က Universal - Pass ကို"။ အမှားအယွင်းများ၏ရှေ့မှောက်တွင်၏ဖြစ်ရပ်အတွက်သတင်းပေးပို့နေကြသည်။
သငျသညျ ပို. ပင်လေးနက်ရောဂါလက္ခဏာတွေကိုမလိုအပ်လျှင်, ဒီဟာရေရှည်မှာ SeaTools တစ်လောကလုံးစမ်းသပ်မှုအားဖွငျ့ဖြစ်သင့်သည်။ drive ကို၏အမည်ကိုအနားမှာ box ကို Check, ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "အခြေခံစမ်းသပ်မှု" နှင့်ကို select "Long-ရည်ရွယ်ချက်".
အချိန်ကြာမြင့်စွာရည်ရွယ်ချက်စမ်းသပ်စတင်သည်။ ၎င်း၏ဒိုင်းနမစ်အဖြစ်ယခင် scan ကကော်လံထဲမှာဖော်ပြပါတယ် "ပြည်နယ်စမ်းသပ်"ဒါပေမယ့်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှဒါဟာသိပ်ကြာကြာယူပြီးနာရီပေါင်းများစွာကြာနိုင်ပါသည်။
စမ်းသပ်မှုရလဒ်တွေကိုပြီးတဲ့နောက်ဒါဟာပရိုဂရမ်ကို window တွင်ပြသပါလိမ့်မည်။ အောင်မြင်မှုအမှု၌၎င်း, အဘယ်သူမျှမအမှားအယွင်းများကော်လံထဲမှာရှိပါတယ် "ဟုအဆိုပါ drive ကို၏ပြည်နယ်" ပေါ်လာ "ရေရှည်တစ်လောကလုံး - Pass ကို".
သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့, Seagate SeaTools, အရေးအကြီးဆုံးကတော့, အ hard disk ကို၏ရောဂါများအတွက်အခမဲ့ tool ကိုအတော်လေးအဆင်ပြေသည်နှင့်။ ဒါဟာနက်ရှိုင်း၏အဆင့်ကိုစစ်ဆေးနေဘို့အများအပြားရွေးချယ်စရာပေးထားပါတယ်။ စမ်းသပ်များအတွက်လိုအပ်သောအချိန်ပဲဂရုစိုက်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့အပေါ်မူတည်ပါလိမ့်မယ်။
Method ကို 2: Western Digital ကဒေတာများကိုအသက်ကယ်သမား Diagnostic
Program ကို Western Digital ကဒေတာများကိုအသက်ကယ်သမား Diagnostic Western Digital ကထုတ်လုပ်သောယင်း hard drive တွေစစ်ဆေးအရှိဆုံးသက်ဆိုင်ရာဖြစ်လိမ့်မယ်, ဒါပေမဲ့တခြားထုတ်လုပ်သူများထံမှ drives တွေကိုများ၏ရောဂါအတွက်လည်းသုံးနိုင်ပါတယ်။ ဒီ tool ၏ functionality သည့် HDD ကိုတွေ့မြင်နှင့်၎င်း၏ကဏ္ဍစကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့ကဖြစ်နိုင်ခြေကိုမှန်ကန်စေသည်။ အပိုဆုအဖြစ်, ထို program နောက်ဆုံးတော့သူ့ရဲ့ပွနျလညျထူထောငျဖြစ်နိုင်ခြေမရှိဘဲ hard drive ကိုအနေဖြင့်မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုဖျက်ပစ်နိုင်ပါတယ်။
Western Digital ကဒေတာများကိုအသက်ကယ်သမား Diagnostic Download
ရိုးရှင်းတဲ့ installation လုပ်ငန်းစဉ်ကိုပွီးနောကျ, အသက်ကယ်သမား Diagnostic ကွန်ပျူတာကို run ။ ဤသည်လိုင်စင်သဘောတူညီချက်၏ပြတင်းပေါက်ဖွင့်လှစ်။ setting အကြောင်းကို "ကျွန်မဒီ License Agreement ကို accept" တံဆိပ်လက်မှတ်ကိုခန့်ထား၏။ next ကိုစာနယ်ဇင်း "Next ကို".
ပွင့်လင်းပြတင်းပေါက်။ ဒါဟာကွန်ပျူတာ disk ကို drives တွေကိုချိတ်ဆက်အကြောင်းကိုအောက်ပါအချက်အလက်များကိုဖော်ပြပေး:
အဆိုပါစမ်းသပ်မှု run destination သည် disk ကို၏နာမတော်ကို select နှင့်အမည်အားအနီးရှိ icon ကို click ပါရန် "စမ်းသပ် run ဖို့ကိုနှိပ်ပါ".
ဒါဟာစစ်ဆေးခြင်းကိုအဘို့အတော်တော်များများအတွက်ရွေးချယ်စရာများကမ်းလှမ်းရန်တံ့သောပြတင်းပေါက်ဖွင့်လှစ်။ စတင်ဖို့, select လုပ်ပါရန် "လျင်မြန်စွာစမ်းသပ်"။ စာနယ်ဇင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းစတင်ရန် "Start".
ဒါဟာသင့်ရဲ့ PC မှာ run နေသောသန့်ရှင်းစင်ကြယ်အနီးကပ်ရှိသမျှသည်အခြားသောအစီအစဉ်များကိုစမ်းသပ်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါလိမ့်မည်ရှိရာပြတင်းပေါက်ဖွင့်လှစ်။ အဆိုပါ applications များပိတ်ပစ်, အဲဒီနောက်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "အိုကေ" ဒီပြတင်းပေါက်၌တည်၏။ သင့်အနေဖြင့်စမ်းသပ်တွေအများကြီးယူသှားမပြုခဲ့သောကွောငျ့, ဆုံးရှုံးသွားသောအချိန်စိုးရိမ်ရန်မလိုပါ။
စမ်းသပ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုစတင်ရာ၏ဒိုင်းနမစ်အတွက်ပြောင်းလဲနေသောညွှန်ပြချက်ကြောင့်သီးခြား window တွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
ရှိသမျှကောင်းအဆုံးသတ်နှင့်ပြဿနာများကိုအတူတူ window တွင်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြလျှင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းပြီးနောက်အစိမ်းရောင်အမှန်ခြစ်အမှတ်အသားကိုပြသပါလိမ့်မယ်။ ပြဿနာများကိုအမှတ်အသား၏အမှု၌အနီရောင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ပြတင်းပေါက်ကလစ်ပိတ်ဖို့ရန် "ကိုပိတ်ပြီး".
အဆိုပါအမှတ်အသားကိုလည်းစမ်းသပ်စာရင်း box ထဲမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်။ လာမယ့်စမ်းသပ်မှုအမျိုးအစားမီးမောင်းထိုးပြစတင်ရန် "တိုးချဲ့စမ်းသပ်" နှင့်စာနယ်ဇင်း "Start".
တနည်းကား, ပြတင်းပေါက်အခြားအစီအစဉ်များကိုဖြည့်စွက်ရန်အဆိုပြုချက်ကိုနှင့်အတူပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဤအမှုကိုနှင့်စာနယ်ဇင်း "အိုကေ".
ပြဿနာတွေရှိပါတယ်လျှင်ယင်း၏ပြီးစီးပြီးနောက်ယခင်အမှု၌ရှိသကဲ့သို့, ထိုအမှတ်အသား, အပြန်အလှန်, အောင်မြင်သောပြီးစီးအပေါ်ပြသ, ဒါမှမဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ စာနယ်ဇင်းများ "ကိုပိတ်ပြီး" စမ်းသပ်မှုပြတင်းပေါက်ပိတ်ဖို့ရန်။ ဒီရောဂါခုနှစ်တွင် Winchester ကအသက်ကယ်သမား Diagnostic အတွက်ပြီးပြည့်စုံသည်။
Method ကို 3: HDD Scan ကို
HDD Scan ကို - အားလုံးသင့်အလုပ်များကိုကိုင်တွယ်တဲ့ရိုးရှင်းပြီးအခမဲ့ဆော့ဝဲ: ကဏ္ဍများစစ်ဆေးနေနှင့် hard drive ကိုစမျးသပျမှုထွက်တင်ဆောင်။ သို့သော်ယင်း၏ရည်ရွယ်ချက်အတွက်အမှားအယွင်းများ၏ဆုံးမပဲ့ပြင်မပါဝင်ပါဘူး - ကိုယ့်သင့်ရဲ့ device ကိုအပေါ်သူတို့အဘို့ရှာဖွေ။ ဒါပေမယ့်ပရိုဂရမ်ကိုသာစံ hard drive တွေထောက်ခံပါတယ်, ဒါပေမဲ့ SSD ကိုပင် drives တွေကို flash ။
HDD Scan ကို Download လုပ်ပါ
က installation ကိုမလိုအပ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဤလျှောက်လွှာကိုကောင်းလှ၏။ ကိုယ့်ကို PC HDD Scan ကို run ။ တစ်ဦးက window ကိုသင့် hard drive ကို၏အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်မော်ဒယ်၏နာမကိုပြသနေ, ဖွင့်လှစ်။ ထိုအခါ firmware ကို၏ဗားရှင်းနှင့်သိုလှောင်မှုအလတ်စားများ၏စွမ်းရည်။
ကွန်ပျူတာသင် dropdown list ကနေသင်စစ်ဆေးချင်သော option ကိုရွေးနိုင်သည်ရာအမှု၌မျိုးစုံ drives တွေကိုရှိပြီးလျှင်။ ထိုနောက်မှရောဂါရှာဖွေရေးကို run ဖို့ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "စမ်းသပ်ခြင်း".
စမ်းသပ်မှု options များနှင့်အတူနောက်ထပ်နောက်ထပ် menus တွေ။ တစ်ခု option ကိုရှေးခယျြပါ "အတည်ပြုရန်".
အဲဒီနောကျခကျြခငျြးကိုပထမဦးဆုံး HDD ကဏ္ဍအရေအတွက်ကိုကဏ္ဍများနှင့်အရွယ်အစားစုစုပေါင်းအရေအတွက်ကစစ်ဆေးနေစတင်ရာနှင့်အတူပေးအပ်ပါလိမ့်မည်ရှိရာပြတင်းပေါက်အပြင်အဆင်များ, ဖွင့်လှစ်။ ဒီ data ဆန္ဒရှိလျှင်ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်, သို့သော်ဤအကြံပြုသည်မဟုတ်။ အဆိုပါ setting ကို၏ညာဘက်ဖို့မြှားအပေါ်တိုက်ရိုက်စတင်စမ်းသပ်နှိပ်ပါသည်။
test mode ကို "အတည်ပြုရန်" ဒါဟာစတင်ပါလိမ့်မည်။ သူ၏တိုးတက်မှုသင် window ၏အောက်ခြေရှိတြိဂံကို click ပါလျှင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
စမ်းသပ်မှု၏အမည်နှင့်၎င်း၏ပြည့်စုံ၏ရာခိုင်နှုန်းဆံ့တံ့သော interface ကို၏ပွင့်လင်းသောဧရိယာ။
စမ်းသပ်မှု၏နာမကိုအပေါ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း, Right-click နှိပ်ပြီးစီးနဲ့တူအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကြည့်ရှုရန်။ ဆက်စပ်မီနူးထဲက option ကိုရွေးချယ် "Show Detail".
ဒါဟာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအသေးစိတ်နဲ့ window ကိုဖွင့်လှစ်။ ထိုကဲ့သို့သောဒြပ်စင်များ၏အရေအတွက်ကိုရည်ညွှန်းနက်ပြာရောင် - အသီးသီး 500 မှ 500 ms နဲ့ 150 ms ထက် သာ. ကြီးမြတ်တဲ့တုံ့ပြန်မှုနှင့်အတူလုပ်ငန်းစဉ်ပြဿနာ disc ကိုကဏ္ဍ၏မြေပုံ, အနီရောင်နှင့်လိမ္မော်ရောင်နှင့်ကျိုးကဏ္ဍတွင်မှတ်သားနေကြသည်။
တစ်ဦးအပိုဆောင်းပြတင်းပေါက်၌ခင်းကျင်းပြသစမ်းသပ်မှုပြီးသွားချိန်ဖော်ပြရန်သင့်တယ် "100%"။ ပြတင်းပေါက် display တွေ၏ညာဘက်အခြမ်းတွင် hard disk ကိုကဏ္ဍများတွင်များ၏တုံ့ပြန်မှုအချိန်ပေါ်စာရင်းဇယားအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။
သငျသညျအဓိကင်းဒိုးကိုပြန်သွားတဲ့အခါမှာတစ်ဦးပြီးစီးခဲ့အလုပ်တခုကို၏ status ဖြစ်ရမည် "Finished".
ထပ်လာမယ့်စမ်းသပ်မှုစတင်ပါမှန်ကန်သော drive ကိုရှေးခယျြဖို့, ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "စာမေးပွဲ"ပစ္စည်းပေါ်တွင်ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်ကလစ် "ဖတ်ရန်" ပေါ်လာသော Menu ထဲမှာ။
ယခင်အမှု၌ရှိသကဲ့သို့, တစ်ဦးဝင်းဒိုး scan ဖတ်သိုလှောင်မှုကဏ္ဍများ၏အကွာအဝေးတစ်ခုအရိပ်အယောင်နှင့်အတူဖွင့်လှစ်။ သငျသညျစွန့်ခွာဖို့လိုအပ် setting များကိုပြောင်းလဲနေစရာမလိုဘဲစာသား၏ပြည့်စုံသည်။ အကွာအဝေးစစ်ဆေးခြင်းကို parameters တွေကိုများ၏ကဏ္ဍများ၏ညာဘက်ဖို့မြှားအပေါ်တာဝန်နှိပ်ပါကိုသက်ဝင်စေရန်။
စာဖတ်ခြင်းအဘို့စမ်းသပ် drive ကိုစတင်ပါ။ ယင်း၏ဒိုင်းနမစ်အတွက်လည်းပြတင်းပေါက်၏အောက်ပိုင်းဒေသဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြင့်စောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းစဉ်အတွင်းသို့မဟုတ်ယင်း၏ပြီးစီးပြီးနောက်အခြေအနေကိုတာဝန်ပြောင်းလဲလိမ့်မည်သည့်အခါ "Finished"သင်က Context Menu ကကိုသုံးပြီးပြုလုပ်အတွက်ကို item ကို select နိုင်ပါတယ် "Show Detail"ယခင်ကပြတင်းပေါက်အသေးစိတ်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုရလဒ်များကိုရွှေ့ဖို့ထုံးစံဖော်ပြခဲ့သည်။
ထိုအခါသီးခြားပြတင်းပေါက် tab မှာ "မြေပုံ" သငျသညျစာဖတ်ခြင်း၏ဘာသာရပ်အပေါ်တုံ့ပြန်မှုကြိမ် HDD ကဏ္ဍအသေးစိတ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
အဆိုပါ hard drive ကိုရောဂါရှာဖွေရေး HDD Scan ကိုပြီးခဲ့သည့် option ကို run ဖို့, နောက်တဖန်ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "စာမေးပွဲ"ယခုမူကားထို option ကိုရွေးပါ "လိပ်ပြာ".
ယခင်အမှုများ၌ရှိသကဲ့သို့, ပြတင်းပေါက်ကဏ္ဍများစမ်းသပ်အကွာအဝေး settings ကိုဖွင့်လှစ်။ ဒါဟာအတွက် data တွေကိုပြောင်းလဲနေတဲ့မရှိရင်ညာဘက်မြှားကို click လုပ်ပါ။
run စမ်းသပ်မှု "လိပ်ပြာ"ဘယ်မေးမြန်းချက်သုံးပြီး data ကိုဖတျရှုဖို့ disk ကိုစမ်းသပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းစဉ်အတွင်းဒိုင်းနမစ်, အစဉ်မပြတ်သကဲ့သို့, HDD Scan ကိုအဓိက window ၏အောက်ဆုံးရှိသတင်းပေးများ၏အကူအညီဖြင့်စောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ စမ်းသပ်မှုပြီးသွားချိန်ဆန္ဒရှိလျှင်, သင်သည်ဤအစီအစဉ်တွင်စမ်းသပ်ခြင်း၏အခြားအမျိုးအစားများအတွက်အသုံးပြုခဲ့တာကိုအတူတူပါပဲလမ်းအတွက်သီးခြား window တွင်အသေးစိတ်ရလဒ်များကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
ဤနည်းလမ်းကို သာ. ကြီးမြတ်အဖြေရှာတဲ့တိကျမှန်ကန်မှုဘို့သင့်ကိုစေလည်းအကြံပြုသည်ပေမယ့်, အပြေး applications များ၏ပြီးစီးမလိုအပ်ပါဘူးယခင်အစီအစဉ်၏အသုံးပြုမှုကိုကျော်အားသာချက်ရှိပါတယ်။
Method ကို 4: CrystalDiskInfo
CrystalDiskInfo program နဲ့လျင်မြန်စွာကြောင့်အမျိုးမျိုးသော parameters တွေကိုအပေါ် HDD အခြေအနေအကြောင်းအရှိဆုံးပြည့်စုံသတင်းအချက်အလက်ကိုထောက်ပံ့ပေးနေသောကြောင့်ဒီပရိုဂရမ်ကွဲပြားခြားနားသည် Windows7ကို run နေတဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် hard disk ကိုရှာဖွေရေးမှာနိုင်ပါတယ်။
CrystalDiskInfo စတင်ပါ။ သင်ပထမဦးဆုံးအစီအစဉ်ကိုစတင်ရန်အခါ, တစ်ဦးသတင်းစကား disk ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိမဟုတ်ကြောင်းအတော်လေးဘုံပုံပေါ်ပါတယ်။
ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, မီနူးကို item ပေါ်တွင်နှိပ်ပါ "ဝန်ဆောင်မှု"အဆိုပါအနေအထားအဘို့ Go "အဆင့်မြင့်" နှင့်ရရှိလာတဲ့စာရင်းထဲတွင်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ "Advanced Search disk".
ဒါကြောင့်အစပိုင်းတွင်ပြသသည်မဟုတ်လျှင်ပြီးနောက်, hard drive ကို (မော်ဒယ်နှင့်အမှတ်တံဆိပ်အမည်) ၏အမည်, သင်မြင်သင့်ပါတယ်။ နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. လက်အောက်တွင်သင့် hard disk ပေါ်မှာအခြေခံ data ကိုပြသပါလိမ့်မည်:
firmware (firmware ကို);
ထို့အပြင်ခုနှစ်, စံ၏ရှည်လျားသောစာရင်းအတွက် hard drive ကိုပြည်နယ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးသီးခြားစားပွဲပြသမှုသတင်းအချက်အလက်မနှောင့်နှေးရှိသေး၏။ သူတို့တွင်နေသောခေါင်းစဉ်:
ဤအ parameters တွေကို၏ညာဘက်လက်ရှိနှင့်သူတို့၏အဆိုးဆုံးတန်ဖိုးကိုနှင့်ဤတန်ဖိုးများနိမ့်ဆုံးလက်ခံနိုင်သောတံခါးခုံဖြစ်ကြသည်။ လက်ဝဲအခြေအနေကိုညွှန်ကိန်းများဖြစ်ကြသည်။ သူတို့အပြာသို့မဟုတ်အစိမ်းရောင်ရှိကြသည်လျှင်, သူတို့သည်တည်ရှိသည်ဖြစ်သော ပတ်သက်. စံ၏တန်ဖိုး, ကျေနပ်သည်။ အနီရောင်သို့မဟုတ်လိမ္မော်ရောင်နေလျှင် - စစ်ဆင်ရေးအတွင်းပြဿနာတွေရှိပါတယ်။
ထို့အပြင်လူတစ်ဦးချင်းစီဟာ operating parameters များကိုစားပွဲအကဲဖြတ်အထက် hard disk ကိုနှင့်၎င်း၏လက်ရှိအပူချိန်၏ခြုံငုံအကဲဖြတ်ညွှန်ပြ။
အမျိုးမျိုးသောသတ်မှတ်ချက်အားဖြင့်အချက်အလက်များ၏ရလဒ် display ကိုအမြန်နှုန်းနှင့်ပြည့်စုံနှ7Vindovs ပြည်နယ်ပြေးကွန်ပျူတာများပေါ်တွင် hard drive ကိုစောင့်ကြည့်ဘို့ကိုအခြားတူရိယာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် CrystalDiskInfo ။ ဤဆောင်းပါး၌ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်သတ်မှတ်ပါရန်ဤဆော့ဖ်ဝဲအသုံးပြုမှုအများအပြားအသုံးပြုသူများနှင့်ကျွမ်းကျင်သူများကိုအကောင်းဆုံး option ကိုတို့ကစဉ်းစားသည်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
Method ကို 5: Windows အ features တွေ Check
HDD သို့သော် operating system ကိုအပြည့်အဝ-စကေးစမ်းသပ်ခြင်းမပူဇော်ဘူး, သာအမှားအယွင်းများများအတွက် hard drive ကိုစစ်ဆေးနေအများဆုံး Windows7ကတဆင့်ရောဂါနှင့်အခွင့်အလမ်းများကိုနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ပြည်တွင်းရေး utilities ၏အကူအညီနှင့်အတူ "Disk ကို Check" တစ်ဦး hard disk ကိုစကင်ကိုလုပ်ဆောင်ပါပေမယ့်လည်းသူတို့တွေ့ရှိလျှင်ထိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားမှသာဖြစ်နိုင်ပါ။ ဒီ tool ကို run, သင် OS ကို၏ graphical interface တစ်ခုမှတဆင့်များနှင့် အသုံးပြု. နှစ်ဦးစလုံးနိုင် "Prompt ကိုဆင့်ဆို"အမိန့်ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် "Chkdsk"။ အသေးစိတ် HDD ကျနော်တို့သီးခြားဆောင်းပါးထဲမှာတင်ပြထားသော algorithm ကိုစမ်းသပ်ရန်။
သင်ခန်းစာကို: Windows တွင်အမှားအယွင်းများများအတွက် Disk ကို Check 7
ကျနော်တို့ windose7မှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းက Third-party software များ၏အကူအညီနှင့် built-in utility ကိုစနစ်များကိုလျှောက်ထားအတူ hard drive ကိုအဖြစ်ရောဂါဖြစ်စေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, Third-party software များအသုံးပြုခြင်းသာအမှားများကို detect နိုငျသောစံနည်းပညာများအသုံးပြုခြင်းထက်, hard drive ကိုတစ် In-depth ကိုပိုပြီးနှင့်ကွဲပြားခြားနားပုံတစ်ပုံကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ဒါပေမယ့်သင်က download လုပ်ပါသို့မဟုတ် install ဘာမှ, သူတို့ရှာဖွေတွေ့ရှိလျှင်မှတပါး, ပြည်တွင်းရေး system ကို utility ကိုအမှားပြင်ပေးဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်မှမလိုအပ်ပါဘူးအဆိုပါစစ်ဆေးမှု Disk ကိုသုံးစွဲဖို့။